हेलिकप्टरबाट सुत्केरीको उद्धार - कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
सल्यान — दुई दिनअघिमात्रै जिल्ला अस्पताल सल्यानमा शल्यक्रिया गरेकी सुत्केरीको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ ।
शारदा नगरपालिका २ डाँडागाउँ बस्दै आएकी २० वर्षीया अर्चनाकुमारी यादवको शरीरमा एक्कासी अक्सिजनको कमी देखिएपछि हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको हो ।
दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई हवाई उद्धार कार्यविधि २०७५ अनुसार यादवलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेर थप उपचारका लागि कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत लगिएको जिल्ला अस्पताल सल्यानका ईन्चार्ज डा. भीमकान्त जैसीले बताए । कोरोना परीक्षण गर्दा नेगेटिभ आएकाले उनलाई फोक्सोसम्बन्धी रोग हुनसक्ने उनले जानकारी गराए ।
चोन्ना गाउँपालिका १ महोत्तरीकी यादवका श्रीमान् त्रिजमावि लुहापिङ्गमा पढाउँदै आएकाले उनी श्रीमानसँग सल्यान बस्दै आएकी थिइन् । जिल्ला अस्पतालमा आईसीयु र भेन्टिलेटरसमेत नभएकाले बाहिर पठाउनु परेको अस्पतालका ईन्चार्ज डा. जैसीले जानकारी गराए । सुत्केरी महिला यादवको अवस्था जटिल भएको र पर्याप्त स्रोत साधन नभएकाले सबैको सहकार्यमा कार्यविधि नुसार नै हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीदेवी होमागाईंले बताइन् ।
प्रकाशित : श्रावण ७, २०७८ १६:२४
अब नेपालमै क्यान्सर रोगको औषधि उत्पादन
काठमाडौँ — नेपालमा पहिलो पटक क्यान्सर रोगको औषधि उत्पादन सुरु हुने भएको छ । टिजिग फर्मा यो औषधि उत्पादन सुरु गर्ने भएको हो ।
गत आइतबार राजधानीमा एक कार्यक्रम गरी टिजिगले उत्पादन गर्न लागेका ‘एन्टी क्यान्सर’ सम्बन्धी औषधिहरु अनावरण गरेको छ ।
टिजिगका कार्यकारी निर्देशक शैलेश वैद्यले औषधि व्यवस्था विभागसँग स्वीकृति लिएर औषधि उत्पादन प्रक्रिया सुरु गरेको र एक महिनाभित्र केही औषधि व्यवसायिक रुपमा बजारमा पुग्ने जानकारी गराए ।
टिजिगले अहिले औषधि व्यवस्था विभागबाट १५ वटा मोलिक्युल्स लागि स्वीकृति पाइसकेको छ ।
कार्यकारी निर्देशक बैद्यले टिजिगले उत्पादन गर्ने औषधिको मूल्य विदेशबाट आउने औषधिको तुलनामा सस्तो हुने दाबी गरे ।
प्रकाशित : श्रावण ७, २०७८ १६:२१
भाडा ११०, सरकार दिन्छ ३४ रुपैयाँ
एमालेका ४ सांसद पदमुक्तपछि कर्णाली सरकार बहुमतमा
स्थानीय तह भाडाकै घरमा